Inye ụgbọelu na-adịgide adịgide ugbu a maka ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Cologne Bonn
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Inye ụgbọelu na-adịgide adịgide ugbu a maka ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Cologne Bonn
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Neste guzobere ọkọnọ nke Neste MY Sustainable Aviation Fuel na Cologne Bonn Airport.
Ọdụ ụgbọ elu Cologne Bonn bụ otu ọdụ ụgbọelu German mbụ ebe Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF) dị ugbu a maka ụgbọ elu niile.
Flightgbọ elu nke mbụ jiri Neste MY SAF bụ ụgbọ elu na-ebu ibu n'isi ọnwa June nke ASL Airlines na-arụ n'aha Amazon.
Gba mbọ na-arụ ọrụ ụgbọ elu na-adịgide adịgide bụ ihe ọzọ dị mkpa maka ebumnuche anyị ogologo oge nke ụgbọ elu na-anọpụ iche CO2.
Neste, onye na enye ahia mmanu ugbo elu (SAF), eweputala mmanye Neste MY Sustainable Aviation Fuel na Ọdụ ụgbọ elu Cologne Bonn. Site n'ime nke a, Neste na - enyere aka ị nweta ọkwa na - arịwanye elu site na ngwongwo ikuku na ndị ahịa ụlọ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Cologne Bonn. AFS, onye na-eweta ọrụ maka ịgbanye mmanụ ụgbọ elu na Germany, na-akwado Neste ijere ahịa a. Flightgbọ elu mbụ tinyere Neste MY SAF bụ ụgbọ elu buru ibu na mmalite June nke ASL Airlines na-arụ n'aha Amazon.
Dịka onye bu ụzọ na nkwado, Cologne Bonn Airport bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu German mbụ ebe Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF) dị ugbu a maka ụgbọ elu niile. Ebe ọ bụ na Cologne bụ isi ihe na-ebu ibu na Germany, nnweta SAF ga-enye ndị na-ebu ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ ohere iji belata ikuku gas na-ekpo ọkụ nke ụgbọ elu ha kpatara. Ndị ahịa mbụ ritere uru site na ohere a bụ Amazon.
“Anyị bụ ndị mpako na-enwe ike inye anyị ụgbọ elu adigide ọzọ ụgbọelu fuels. Anyị na-eji ọtụtụ ọhụụ ọhụụ na Cologne Bonn Airport - site na mbara igwe na teknụzụ LED maka ọrụ ụlọ ọhụụ na ụgbọ ala na akụrụngwa nwere ike na apron. Iji mbanye ụgbọ elu na-adigide bụ ụzọ ọzọ dị mkpa maka ebumnuche anyị ogologo oge nke ụgbọ elu na-anọpụ iche CO2, ”ka Johan Vanneste, Onye isi ala na onye isi oche nke Flughafen Köln / Bonn GmbH na-akọwa.
Jonathan Wood, osote onye isi ala Europe, Renewable kwuru, "N'agbanyeghị ọnọdụ azụmahịa siri ike, ụlọ ọrụ ụgbọelu, na ngalaba ndị na-ebu ibu, na-egosi ntinye dị ukwuu itinye ego na mmanụ ụgbọ elu na-adigide iji nye ndị ahịa ahịa mmanụ ikuku carbon." Gbọ elu na Neste. “Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịnabata ọdụ ụgbọ elu Cologne Bonn na netwọọdụ ọdụ ụgbọelu na-eto eto yana nnweta SAF, ma na-ele anya inwe ọganihu n’iru mbenata ikuku nke ikuku nke ikuku.”